लेख के छ यो जाडो, ग्रह मा स्थान आधारमा कि, र किन छन् को परिवर्तन मौसम।
त्यहाँ हाम्रो ग्रहमा जीवन, केही वैज्ञानिकहरूले 'गणना अनुसार,3भन्दा बढी अर्ब वर्ष पुरानो र हाम्रो सौर्य प्रणाली भर मात्र धरती जैविक जीवनको विकास र मर्मतका लागि केही अवस्था छ भाग्यशाली थियो। यस्तो कारक धेरै छन्। यो र तरल पानी उपस्थिति, केन्द्रीय तारा, को गुरुत्वाकर्षण, वातावरण, र यति मा। एन तर एक निश्चित दूरी, त्यहाँ अर्को कारक यसलाई आफ्नो अक्ष वरिपरि ग्रह गरेको परिक्रमा छ, त्यहाँ मौसम परिवर्तन छ जसद्वारा छ। तिनीहरूले कसरी सम्बन्धित छन्? धेरै सरल, एउटै पारा को एक उदाहरण हेर्न। यो ग्रह बाहेक, सधैं तापमान को घाम पक्षमा लगभग 500 डिग्री सेल्सियस पुगेको र राति अनन्त अन्धकार र चिसो ठाउँ शासनकालमै किन छ जो एक पक्ष, गर्न खोलिएको छ, सूर्य निकै नजिक छ, र। त्यसैले, तपाईं देख्न सक्नुहुन्छ रूप मा, मौसम धेरै महत्वपूर्ण छन्। र यो मामला मा हामी जाडो कुरा। त्यसैले, जाडो के हो?
सुरु गर्न, नियम सामना गरौं। जाडो - यो जुन बेलामा तापमान तल शून्य डिग्री सेल्सियस स्थिर राखिएको र अक्सर छ snows चिसो मौसम, छ। डिसेम्बर, जनवरी र फेब्रुअरी - तपाईं उत्तरी गोलार्द्ध मा पात्रो जाडो लाग्न भने, यो3महिना रहन्छ। र दक्षिण मा - जुलाई, जुन र अगस्ट। त्यसैले, अब हामी के जाडो थाहा छ। तर, किन यो छ?
को अक्ष को झुकाव
आकाशीय मेकानिक्स सबै कुरा, वास्तवमा, ग्रह rotates रूपमा। केही PERIODICITY संग धरती उत्तरी गोलार्द्ध किनभने औसत तापमान बिस्तारै कम छ के को, कम सौर गर्मी प्राप्त किनकी, क्रांतिमण्डल को विमान आदर axial झुकाव भिन्न छ, र यसको प्रतिरोध0डिग्री तल हुँदा र वास्तविक मानक समय सुरु हुन्छ। यसले डिसेम्बर 22 देखि मार्च 21 रन उत्तरी गोलार्द्ध मा Astronomical जाडो भनिन्छ। त्यसैले, हामी के जाडो को प्रश्न छलफल।
को Astronomical मिति र पात्रो जाडो भए तापनि नकारात्मक तापमान र वर्षा संग चिसो मौसम जताततै विभिन्न तरिकामा हुन्छ। उदाहरणका लागि, Oymyakon को रूसी गाउँ, अगस्त 31 देखि सुरु, थर्मामीटर अक्सर नकारात्मक तापमान, एउटै Yakutia र Chukotka अन्य क्षेत्रहरु लागू देखाउँछ। खैर, Primorye र खबरोभ्स्क क्षेत्र सागर गर्न निकटता कारण मा, जलवायु मामुला र चिसो, आउनुहोस् क्रमशः पछि छ।
यो जाडो छ के को प्रश्न विश्लेषण, यो समुद्र धाराहरु, जो जलवायु मा एक महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह उल्लेख लायक छ। उदाहरणका लागि, खाडी स्ट्रिम द्वारा धोए छ जो नेदरल्याण्ड, हल्का र समशीतोष्ण जलवायु, एउटै Chukotka जबकि, यो गम्भीर चिसो र वर्षा देखि वर्ष को सर्वाधिक पीडित छ, लगभग एउटै अक्षांश मा हुँदा छ।
धरती मा, त्यहाँ क्षेत्र जहाँ कहिल्यै जाडो छन्। र स्थानीय चिसो लागि लिन भन्ने तथ्यलाई, बस उत्तरी गोलार्द्ध बासिन्दाहरू मा एक मुस्कान कारण, र यो हो - भूमध्यरेखा। फेरि, किनभने पृथ्वी गरेको अक्ष को झुकाव को, मौसम को परिवर्तन त्यहाँ लगभग उत्पन्न गर्दैन, तर वर्षाको मौसममा नियमित आउँदैन।
ध्रुवीय दिन र रात
दुवै उत्तर र दक्षिण ध्रुव, त्यहाँ दुइ धेरै रोचक घटना भएको ध्रुवीय रात र दिन छ। सूर्य 24 घण्टा सेट गर्छ जब - सूर्य अब एक दिन, एउटै कुरा हो, मात्र उल्टो छ जब दिन संग ध्रुवीय रात अवधि छ। यी घटना को अवधि अत्यधिक वर्ष र अक्षांश को समय मा निर्भर छ, तर ध्रुवीय रात को सबैभन्दा लामो अवधि नियमित रूपमा लगभग छ महिना रहन्छ।
मान्छे यस्तो घटना एक लामो समय बाँच्न भन्ने तथ्यलाई तापनि तिनीहरू अझै पनि एक मनोवैज्ञानिक र शारीरिक रूपमा व्यक्ति मा एक प्रभाव छ। समयमा रात मानिसहरू अक्सर निराश र भिटामिन डी को एक गंभीर कमी प्रकट
तसर्थ, हामी के जाडो, हामी छलफल रूपमा शब्द को परिभाषा बुझ्न छन्।
आनन्द - यो के हो? मूल्य र "आनन्द" को लागि एक पर्यायवाचीशब्दप्रविष्टगर्नुहोस्
हल्का समग्र ठोस ब्लक को स्नान: यो यसको निर्माण लागि आवश्यक छ
कसरी फूलगुच्छा देखि एक गुलाब बढ्न वा सधैंभरि सौन्दर्य सुरक्षित
महिला मा thrush कस्तो व्यवहार गर्न, त्यसैले त्यो फर्कन थिएन
उरोलोजस्त, andrologist - यो छ जो, के फरक छ? के रोग बाल उरोलोजस्त, andrologist व्यवहार?
अफगानिस्तान बारे साहसिक: सबै भन्दा राम्रो फिलिमहरु को सूची
सुक्ष्मअर्थशास्त्र जाँच्ने ...
"गार्निअर" - बाल तेल। समीक्षा, फोटो
तरकारी सूप को जाडो लागि लाउने: तस्बिर संग व्यञ्जनहरु
कसले Kroshechka-Havroshechka को Mistress को whims पूरा मदत